TTSweet: တို့အိမ်က အလွဲများ ...
Posted by T T Sweet at 10:23 PM
AMK December 5, 2012 at 11:12 PM
ဂျူးဂျူး ရဲ့ အူးဘားမား ကိုဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်၇တာ ပြီး ပါးစပ်ပိတ်လိုက်၇တယ် တီတီဆွိ မသင့် ၇သေးဘူးဆိုလို့:D
chothettant December 5, 2012 at 11:13 PM
Haha....ဦးခြိမ့် ပုဆိုးမနေတဲ့ ပုံ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ် TT Sweet
ဇွန်မိုးစက် December 6, 2012 at 12:03 AM
ဖတ်ပြီး ပြုံးလိုက်ရတာ မမ။း) အလွဲလေးတွေ ရှိသေးရင် ဆက်ရေးပါဦးနော်။
T T Sweet December 9, 2012 at 6:56 AM
အလွဲတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ မရေးဖြစ်တာတွေက ပိုများတယ်။ အချိန်မရတော့ မရေးဖြစ်ဘူး။ ရေးမယ်ဆိုတော့ မုဒ်က မရှိတော့ဘူး။ မုဒ်ရှိနေရင်တော့ ရေးတာ အရမ်းမြန်တယ်။ ကျေးဇူးနော် ။
တီဆွိက သဘောကောင်းတယ်နော်။ တီဆွိရဲ.ဘလော.ဂ်မှာ ဟင်းချက်နည်းတွေကြည်.ဖို. အဆင်ပြေအောင်တောင် ပြန်ပြီးသေချာလုပ်ပေးထားတယ်။
ဟီးဟီး တချို.တချို.တွေလို ......................
T T Sweet December 9, 2012 at 6:54 AM
တစ်ချို့က ဟင်းချက်နည်းတွေ ရှာရခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ အလွယ်တကူရှာရအောင် သေချာလုပ်ပေးထားတာပါ။ စေတနာကို သိတယ်ဆို ပင်ပမ်းခံရကျိုး နပ်ပါတယ် အနောနိမတ်စ်ရေ။
Q-te December 6, 2012 at 4:53 AM
တီဆွိပိုစ့်တွေဆို အမြဲတမ်း မပြတ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
အိပ်ချင်နေတဲ့အချိန်တောင် ပျူးပြဲဖတ်ပြီးမှ အိပ်တယ် :D :D
စာရေးသားကောင်းပြီး စာဖတ်သူကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်အောင်
ရိုးရှင်းစွာ ရေးနိုင်လို့ အရမ်းကို အားကျမိပါတယ်
စာတွေ အများကြီး ဆက်ရေးပါဦးနော်
T T Sweet December 9, 2012 at 6:53 AM
ကျူ့တီKitchen ကိုလဲ တစ်ချို့ ဟင်းချက်နည်းတွေ မသိရင်လဲ သွားရှာနေကျပါ.. စာတွေ လာဖတ်တယ်ဆိုတာသိရတော့ ကျေးကျေးပါ ကျူတီရေ။
ဟိဟိ ရီနေရတယ် TTsweet ကိုနေ့တိုင်းလာကြည့်တယ်
google reader မှာ tsweet post အသစ်တက်နေတော့ပျော်သွားတာဘဲ။
tsweet ဆိုလို့ကတာ့ဘာဘဲရေးရေးကောင်းပြီးသားဘဲ။u r my favorite :).
T T Sweet December 9, 2012 at 1:17 PM
ကျေးဇူးပဲနော် အားပေးတာ။ ရေးဖို့ အားတွေရှိသွားပြီ။
တီဆွိတို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ..
T T Sweet December 6, 2012 at 8:53 PM
1:39 PM (7 hours ago)
mstint has leftanew comment on your post "တို့အိမ်က အလွဲများ ...":
တစ်ပုဒ်ဆိုလည်း တစ်ပုဒ်ပါလား ဆွိတီရေး)
ဆွိတီရဲ့အလွဲလေးများက ဖတ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်း)
T T Sweet December 9, 2012 at 6:50 AM
တီတင့်ရဲ့ ကွန့်မန့်တွေ မပေါ်လို့ gmail ထဲ ရောက်လာရင် အမြဲပြန်တင်ပေးရတယ်။ လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာထားတတ်တဲ့ အန်တီတင့်လည်း စိတ်ဓာတ်အစဉ် ကြည်လင်ပါစေ။
T T Sweet December 6, 2012 at 8:54 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) has leftanew comment on your post "တို့အိမ်က အလွဲများ ...":
တီတီဆွိတို့များ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ကို ရေးတတ်တယ်..
ဖတ်တဲ့သူလည်း ပျော်..ရေးတဲ့သူလည်း ပျော်း)
T T Sweet December 9, 2012 at 6:48 AM
မချောရေ ဘလော့ဂ်မလည်နိူင်တာလဲကြာလို့ မချောတို့ဖက်တောင် မရောက်ဖြစ်ဘူး။ တာဝန်မကျေသလို ခံစားရတယ်။ အမြဲလာလည် လာဖတ်တာကျေးဇူးနော်။
( ဖေဖေကြီးကိုချစ်တယ် သီချင်းအလိုက်အတိုင်း ဆိုပါရန်)
ဟင်းချက်နည်းတွေကို ဘယ်သူကြည်.ကြည်.ဆိုပြီး ဘလော.ဂ်ကိုမပိတ်ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း၊ ဟိုးအရင်ရေးနေကျအတိုင်း အေးဆေး ပျော်ရွှင်စွာနဲ. ဆက်လက်ရေးသားနေတာကိုက တီတီဆွိစတိုင်လ် ............
T T Sweet December 9, 2012 at 6:46 AM
ကျေးဇူးပါပဲ အနောနိမတ်စ်ရေ။ အဲလိုအားပေးတဲ့ သူတွေရှိရင် စားရေးဖို့ အားပိုရှိသွားတယ်။
San San Htun January 7, 2013 at 5:44 AM
အူဘားမားနဲ့ပုဆိုးတလွှားလွှား ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ တီဆွိရေ..နောင်လည်း ဒီလို အလွဲလေးတွေ ရေးပါဦး..